အိမ်ရာနှင့်အလုပ်မှာလိင်ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်း | USAHello | USAHello
USA တွင်, အိမ်ယာအတွက်လိင်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုနှင့် ပတ်သက်. နှင့်အလုပ်မှာဥပဒေများရှိပါတယ်. ဖြတ်ကျော်လူတွေကိုပစ်ခတ်မရနိုင်, အလုပ်အကိုင်အငွငျးပယျ, သူတို့ trans ဆိုတဲ့ကြောင့်သို့မဟုတ်ကွာအိမ်ရာကနေလှည့်. အလုပ်မှာလိင်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးနှင့်လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နှင့်အိုးအိမ်များတွင်လေ့လာပါ. ဥပဒေရေးရာအကြံဥာဏ်နှင့်အကူအညီရမှဘယ်မှာထွက်ရှာမည်.
တိကျတဲ့ Transgender များအခွင့်အရေးကိုတစ်ဦးချင်းစီပြည်နယ်အတွင်းရှိကွဲပြားခြားနားကြသည်. သို့သော်ရှိသမျှသောအမေရိကန်နိုင်ငံကျော်အတူတူဖြစ်ကြောင်းလိင်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုနှင့် ပတ်သက်. အချို့သောဥပဒေများရှိပါတယ်.
ပြည်သူ့ပြက်လုံးလုပ်သို့မဟုတ် trans ဆိုတဲ့လူတွေအကြောင်းကိုမှတ်ချက်များကိုဆိုလိုတာလို့မရပါဘူး.
သင့်ရဲ့သူဌေးဘာလို့လဲဆိုတော့သင်တို့တွင်အသငျသညျမီးမနိုင် Transgender များဖြစ်ကြသည်.
အကြောင်းပို Read အလုပ်မှာ trans ဆိုတဲ့အခွင့်အရေးများ. တစ်စုံတစ်ဦးကသင့်တဘက်၌ခွဲခြားဆက်ဆံမှုလျှင်, ကချရေးနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ပေါ်သွားသူတစ်ဦးဦးကိုပြောပြရန်သေချာစေပါ. အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ သငျသညျအဘယျသို့ပွုနိုငျ ဒီဖြစ်ပျက်လျှင်.
ယခု, 20 ပြည်နယ်နှင့်ကိုလံဘီယာ၏ခရိုင် လိင်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုရပ်တန့်ကြောင်းထောက်ခံမှုဥပဒေများ. သငျသညျသူတို့အားပြည်နယ်များအတွင်းရှိအိမ်ခြံမြေငှားရမ်းသို့မဟုတ်ဝယ်လျှင်:
သငျသညျလိင်ကြောင့်လူတွေကစွန့်ခွာရန်သင့်အားအတင်းမနိုင်. သင်တစ်ဦးငှားရမ်းသို့မဟုတ်စာချုပ်ရှိပါက, က sta မှသင်တို့အဘို့ဥပဒေရေးရာဖြစ်ပါသည်.
အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးအတွက်သီးခြားအခန်းများအတွက်ဖြစ်နိုငျသောကွောငျ့ပြည်သူ့သင့်ရဲ့ကျား, မမေးပါလိမ့်မယ်. သင်အဖြစ်ခွဲခြားသတ်မှတ်ကိုမဆိုကျားကသူတို့ကိုပြောပြရန်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်.
ဖြတ်ကျော်လူတွေသူတို့ရဲ့အိမ်တွေထဲကအတင်းအကျပ်နှင့်အပျောက်အိမ်ခြေမဲ့အမိုးအကာလွှဲပြီ. တိုင်းငါး Transgender များကလူတစျခုမှာတစ်ချိန်ချိန်ကသူတို့အသက်တာ၌အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ပြီး. သင့်ရဲ့ အနီးဆုံးလိင်တူချစ်သူအသိုင်းအဝိုင်းစင်တာ သင်အွန်လိုင်းစာရင်းမကြောင်းတစ်အမိုးအကာကိုကူညီရှာဖွေစေခြင်းငှါ. အဆိုပါအလီ Forney Center က်ကူးေူပာင်းမြဆိုင်ရာနှင့်အရေးပေါ်ရှိပါတယ် အတော်ကြာပြည်နယ်များအတွက်လိင်တူချစ်သူလူငယ်များအတွက်အိမ်ရာ.
Lambda ဥပဒေရေးရာအကြီးမားဆုံးအမျိုးသားရေးလိင်တူချစ်သူဥပဒေရေးရာအကူအညီများအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည်. အဆိုပါ Lambda ဥပဒေရေးရာ helpdesk သင့်အမှုအားပြန်လည်သုံးသပ်ရန်နှင့်ဒေသခံကိုယ်စားလှယ်များရန်သင့်အားဆက်သွယ်နိုင်သည်.
ရှိ ACLU အခမဲ့ clients များကိုကိုယ်စားပြုကြောင်းတရားဝင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည်. ဒါဟာလိင်တူချစ်သူများအခွင့်အရေးများအတွက်အစီအစဉ်များရှိပြီးနှောင့်ယှက်ခဲ့ကြသူလိင်တူချစ်သူများကလူကိုကိုယ်စားပြုတယ်. သင်လုပ်နိုင်သည် ဒေသခံတစ်ဦး ACLU Affiliate ရှာတွေ့ တိုင်းပြည်နယ်.
လိင်တန်းတူရေးတို့အတွက်အမျိုးသားရေးစင်တာအားလုံး trans ဆိုတဲ့အခွင့်အရေးကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့အလုပ်ဖြစ်တယ်. ဒါဟာထက်ပိုထောကျပံ့ 80 trans ဆိုတဲ့ clients များကိုယ်စားပြုကြောင်းအဖွဲ့အစည်းများ. သင်လုပ်နိုင်သည် fသင့်ရဲ့ပြည်နယ်အတွက် ind trans ဆိုတဲ့ဥပဒေရေးရာန်ဆောင်မှုများ.
လိင် reassignment နှင့် Transit
လိင်တူချစ်သူ: လိင်တူချစ်သူ, လိင်တူချစ်သူ, ရိုးရိုးနှင့်လိင်အသိုင်းအဝိုင်း